Fikradaha naqshadaynta ee 24 Sumoobiga ugu fiican ee ragga iyo dumarka - Fikradaha farshaxanka
Fikradda naqshadaynta ee 24 Sumoobiga ugu wanaagsan ee ragga iyo dumarka
Waa sidee dareenka adigu markaad timaado taatuuga? Miyaad aragtay dad ka hor taatuureedka taraafikada? Tattoo dabiiciga ah ayaa la xidhiidha khuraafaad badan, cabsi iyo xitaa fekerka maqalka. Si kastaba ha noqotee, taatuuga scorpion wuxuu leeyahay micno badan sababtoo ah dad badan ayaa leh aragtiyo kala duwan oo ah dadka qaata tattoo this.
Tijaabinta taraafikada macnaha
Tattoo tumboo micnaheedu waa wax badan oo ka yimaada dadka ka kala yimid meelo kala duwan oo adduunka ah. Tattoo waa mid calaamad u ah oo ku saleysan inta badan habdhaqanka abuurka. Waxay u wakiilan kartaa dabeecada iyo jinsiga labka ah ee labka ah sababtoo ah nooca qoob-ka-ciyaarka ah ee la sameeyo inta lagu jiro maadada. Waxaa loo isticmaalaa in qalliin lagu sameeyo Mayansiyaanka iyo taraafikada waxaa loo adeegsadaa diimo kala duwan si ay u noqdaan waxyaabo kala duwan, badanaaba la xidhiidha sharka. Waxaa loo isticmaali karaa macneheedu tahay ilaalin iyo sidoo kale matalaya dagaal.
Qaar badan oo ka mid ah kuwa ka badbaaday kansarka waxay isticmaalaan #tattoo si ay u sheegaan sheekada socdaalkooda kansarka. Dagaalayaasha ama xitaa sanduuqyada waxaa badanaa lagu arkaa inay isticmaalaan tattoo si ay u tusaan cidda ay yihiin. Tattoo scorpion micnaheedu waa iska caabin iyo caqabado qaar marka qaarkood ay u qaadaan si ay u noqdaan kuwo xasaasi ah, sharaf leh oo daacad ah oo daacad ah. Tattoo sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in laga hadlo dareenka, adkeysiga, dagaalka, adkaysiga, ilaalinta, dulqaad, difaac, dhimasho, daacadnimo iyo shar.
Adiga ayaa go'aan ka gaara waxa aad rabto in shaashadda duufantaada ee macnaheedu yahay. Waxaa jira noocyo kala duwan oo taraarax ah oo loo yaqaan 'scorpion scorpion # designs oo aad kala dooran kartid, mid kastana wuxuu leeyahay macnahooda. Si kastaba ha ahaatee, waxaad si toos ah u siin kartaa tattoo-gaaga si aad uga dhigto wax ka duwan.
Gobolada iyo degmooyinka qaarkood waxay xakameynayaan casharrada iyo farshaxanka tattoo ee Maraykanka. Hase yeeshee, tani macnaheedu maaha in qofku aanu ku dhejin karin gudaha ama gurigeeda sababtoo ah awoodda ay leedahay mashiinka tattoo via
Tattoo Super Scorpion Super
Qaadashada mashiinka qallafsan ee mashiinka unugyada leh iyo kuwa takhasuska leh ee aan hagaagsaneyn waxay kugula talin karaan adiga, iyo kuwa farsamada, halis walbaa dhimaya xanuunka aan la adkeyn karin, tusaale ahaan, cagaarshowga ama maqaarka jirka oo abuuray shimbiro microscopic ah. via
Scorpion Scorpion Hand Tactoo
taatuusha ayaa ah nooca is-muujinta, laakiin shakhsiyaadka doorta in ay qaataan tattoo-yada ama jirka waa in ay tagaan xafiis loo fasaxo oo ay fursad u siiyaan inay ka hadlaan hababka samaqabka ee kuwa farsamoyaqaanada ka shaqeeya dukaanka ama qolka taranka. via
Maxay macnaheedu tahay in laydh? Sanado badan, waxaynu aragnay boqollaal dad ah oo isticmaalaya tattoo-tufaantiga dabiiciga ah si ay u qurxiyaan jirkooda. Qof kastaa wuxuu leeyahay aragtidiisa gaar ah oo ah inuu arko taatuuga dabaysha. via
Dharboorka Tartu dib u noqo
Waxaan ku dhiiri galineynaa dadka taatuusha ah inay ka shaqeeyaan shaqadooda. Hel xafiiska xafiis oo buluug ah oo dalbana booqasho - dukaanka waa inuu noqdaa mid aan fiicnayn oo nadiif ah. Iskuday inaadan xishoonin inaad kala sheekaysato khabiirada ku saabsan farsamooyinka amniga. via
Dharbaaxa lugta lafdhabarta
Tartoo garabka Garbaha
Tijaabadu waxay ka dhigan tahay mid ka badbaado badan waqtigii kale, ka hor intaanad u soo jiidin ganacsade farxad leh, waxaa lagama maarmaan ah in shaqadaada la qabto. Xirfadlayaasha jirka ayaa lagu tiirsanaa si ay u qabtaan si dhakhso ah si ay u noqdaan habab wanaagsan. via
Tattoo Skoretal Scorpion Skelet
Adigoo isticmaalaya habka fayoobida, kabaha tufaaxa iyo boogaha jidhka ayaa iska ilaaliya naftooda iyo macaamiishooda laga bilaabo baaxada infakshanka iyo jeermisyada keeni kara cudurka. via
Abaalmarinta Scorpion Tattoo
Sawirrada "scorpion tattoos" waa qorshooyinka maqaarka lagu sameeyay cirbadaha iyo khadadka. Helitaanka "khadadka" waa door muhiim ah. Xasuusnow in taatuuga dabiiciga ah uu si guul leh u joogteeyo, iyo inkastoo xaqiiqda ah in ay u muuqan karto in laga saaro taatuuga scorpion, nidaamku waa qaali iyo faraciisa. via
Tattoo Cagajiid Bawdada
Dhaqdhaqaaqyada naqshadda ee Tattoo-ga
Naqshad tattoo ah sida tan looma diidi karo. Quruxda iyo aragtida ay ka dhigayso qofka xiran wuu ku hadlaa. il image
Scorpion Scorpion Chatt
Dhallaanka Tartu Ragga
Maalmahan maalmahaan caleemo qoryaha ah waxay noqdeen wax caadi ah oo aan ku aragno ku dhawaad ​​afartan qof. Tijaabadu waa #artaa shaqooyinka loo adeegsan jiray inay metelaan waxyaabo badan oo ka hadlaan dadka. Dad badan ayaa soo afjaray murugo ku dhejisey tarooto, sababtoo ah ma aysan ciyaarin. il image
Tattoo Scorpion wuxuu noqday mid ka mid ah xayawaanka casriga ah ee aan ku aragno meydka rag iyo dumarba. Goonku waa maalmo marka la leeyahay tattoo loo yaqaan 'scorpion tattoo' loo yaqaan 'taboo'. Dhamaan adduunka oo dhan, dadku waxay u yimaadeen inay qaataan quruxda iyo fariinta in dharboorka scorpion loo isticmaali karo in la gudbiyo. il image
Tattoo badanaa Aborigood ah
Qaado tusaale ahaan, sidee ayay u dareemaan jilicsanaanta taatuuga sida tan? Tani waa hal tareemo dabiici ah oo soo noqnoqday sanado badan. Inta badan annaga ayaa noogu mahadnaqay shaqooyinka farshaxan ee cajiibka ah ee aan ku dhajinnay qaybo kala duwan oo jirkeena ah in ay inoo xusuusiyaan xaadirka, taariikhda iyo xitaa mustaqbalka. il image
Farshaxanka tattoo wuxuu noqday mid ka mid ah qaabka farshaxanka ugu da'da weyn ee lagu fekeray bini-aadanka. Farshaxanku wuxuu noqday nooc ka mid ah ficil ahaan ama ficil is khilaafsan oo ku xiran waxa loo isticmaalo. il image
Waxaa sidoo kale jira dadka isticmaala tattoo sida qaab quruxsan. il image
Qurxinta sawir-celinta scorpion waxaa kaliya oo la qadarin karaa marka ay kufsameyso khatartaada. Qayb ka mid ah jirka aad u baahan tahay tattoo dabiiciga ah wax badan ayaa jira. il image
Cajiibka Cawrada Tattoo
Halkan riix halkan si aad u badan Scorpion Tattoos
Tags:taraagada kubbadda sawirada gabdhaha sawirrada ragga
Tattoos Wadnahasawirada gabdhahatattoo maroodigaDhaqdhaqaaqagaraacista gacmahaTilmaamta jaalaha ahtattoo ah octopuswaxay jecel yihiin tattoostattoos taajkiitattoos moontattoos qosol lehlaabto laabtatattoos sleevefikradaha tattoowaxaa la dhajiyay tattoostattoo tilmaantaraagada kubbaddanaqshadeynta mehnditattoos eagletattoos qabaa'ilkatattoos qoortaTattoo Feathertattoos ubaxkoi kalluunkatattoos gacantatattoos iskutallaabtatattoo dheemanjimicsiga bisadahasawirrada raggatattoos cagtashimbir shimbirshaatiinka shiidanTartoo ubax badanlibto libaaxku dhaji tattoosarrow Tattoomuusikada muusikadagadaal u laabotattoostattoo indhahalammaanahatattoo biyo ahtattoos saaxiib saxa ahJoomatari Tattooscalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahtattoos qorraxdahenna tattoosawirada malaa'igtaTattoo infinitysawir gacmeed